YORKSHIRE TERRIER DOG SAWIRADA TARANKA, YORKIE, BOGGA 1 - EEYAHA
'Tani waa eeyga aan jeclahay ee Baby. Ilmuhu waa Yorkie nadiif ah. Sawirkaan waa 9 bilood jir walina waxay jeceshahay inay ku calaliso waxkastoo ay la kulanto. Waxay jeceshahay inay qaadato socod dheer xeebta. Ilmuhu aad ayuu ugu fiican yahay eeyaha kale. Waxay sameysaa jimicsi fara badan. Waxay ku raaxeysataa baacsiga shimbiraha iyo dabagaallada daaraddeenna. Waxaan daawaday bandhiga Cesar Millan mid ka mid ah casharadii aan bartay ayaa ah sida ugu wanaagsan ee aad u fahamto dhaqanka eeygaaga sida ugu fiican ee aad awoodi karto inaad iyaga la xiriirto
Teddy the Yorkie oo ah 2 1/2 sano jir
Teddy The Yorkshire Terrier oo jira 1 sano iyo 8 bilood
Toby Yorkshire Terrier sida eey yar oo jirta 4 bilood
Kala soo bax shaashadda Yorkie da'da 9 jirka ah oo miisaankeedu yahay 4 rodol
Boqor Charles isku darka chihuahua cavalier
jiir terrier american eskimo mix
'Mudane. Fonzarelli waa x-yar yar Yorkie oo leh shakhsiyad aad u weyn. Qof walba wuu jecel yahay isaga. Isagu waa kan ugu jacayl badan, oo aan yaboohay Yorkie oo aan waligay la kulmay mid ka mid ah burooyinkiisa ugu fiican ayaa ah Bulldog . Waxaan jecel nahay Cesar. Waxaan falsafadiisa ku dabaqi karnaa eey kasta oo aan la kulanno. Waxaan ahay hogaamiyaha xirmada oo Relli wuu ogyahay. Dadku way layaabanyihiin sida wanaagsan ee uu udhaqmay iyo inuu sax ku joogi doono agtayda socodka . '
'Tani waa Theodore, oo ah 1 jir wax barata Yorkshire Terrier. Isagu gabi ahaanba waa eeygii abid ugu fiicnaa! Aad buu u macaan yahay, isagoo aaminsan in qof kasta oo uu la kulmo ay tahay saaxiibkiisa ugu fiican. Weligiis qofna kama korin oo waqti kasta oo aan u qaadno meel ay dadku isaga uun ku soo dhawaadaan! Isagu waa Casanova dhab ah! Isaguba wuu yaryahay, sidoo kale. Wuxuu culeyskiisu yahay 3.4 lbs. Labada waalidba waxay ahaayeen kuwo quruxsan oo aad u macaan dabeecad leh. Weli waxoogaa wuu sii kordhayaa waxna kama weydiisan karo Yorkie ka fiican. Isagu ma ahan 'yapper' sida dadku ku andacoodaan Yorkies oo kale, xitaa wuxuu gurigiisa kula wadaagaa 90-rodol Isku darka Akita . '
Lili the Yorkie oo reer Israa’iil ah
Tani yar yar ee la jecel yahay waxaa loogu magac daray Nina. Waxay ka tirsantahay bahdayda qalinka.
Kuwani Yorkies la jecel yahay waxaa lagu magacaabaa Valentine, Cricket iyo Phoebe. Lahaanshaha sawirka Cricket iyo Phoebe's World
Sifiri Yorkie ah
Nicholas iyo Santa
isku darka collie / australia australia
Tani waa Int. Ch. Tinker Toy ee Tinseltown oo 2 sano jir ah, culeyskiisuna yahay 3.3 rodol.
Winnie oo jirta 4 bilood
Macluumaadka Terrier-ka Yorkshire
Yorkshire Terrier Sawirada 1
Yorkshire Terrier Sawirada 2
Yorkshire Terrier Sawirada 3
Yorkshire Terrier Sawirada 4
Yorkshire Terrier Dogs: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
sawirada eeyga buuraha Caucasian
Jack Russell Pit basset hound isku darka
xadka collie australia eey lo 'ah
waa maxay eey buluug ah eey
gascon bluetick coonhound iib ah
Pyrenees weyn oo qofka ku xiga